Isdalleemin - WalWaal Online News and Information about Somalia
Home Bulshada Isdalleemin
Ammaantu waa dabinka ugu khatarsan ee lagu hodo dadka masaakiinta ah, qofka ammaanta jecelina waa qofka ugu fudud ee la khiyaamayn Karo. Kitaabka “48 Laws of Power” wax kale kama sheekeeyo, waa 48 qaanuun oo laba xirfadood oo waaweyn ku baraya. Labadaa xirfadood waxa ay kuu sahlayaan in aad hadafkaaga si fudud u gaadho, hadda waa hadaf kasta oo aad leedahay. Muhiim ma aha dariiqa loo marayo, waxa muhiim ah gaadhitaanka hadafka. Sidaa darteed anshaxa, dadnimada, akhlaaqda, runta, iwm kaalin kuma yeelanayaan habdhaqankaaga.
Kow, habdhaqankaaga ayaa laga dhigayaa mid hanan kara shakhsiyadda aad danaha ka leedahay. Tusaale ahaan waxa lagu barayaa in qofka aad dan ka leedahay la ammaano, dadka badankiisu ammaanta way jecel yihiin sida aqoonyahan, caalim, maamule, agaasime, qof lagu daydo ayaad tahay, abwaan cajiib ah ayaad tahay, iwm. Ammaanta aad qofka ammaanaysaa waxay ka dhigaysaa inuu kuu nuglaado.
Waxa kala oo lagu barayaa qofka kaa sarreeya in aanad weligaa dareensiin inaad ka aqoon fiican tahay, inaad ka fahan fiican tahay, iwm. waxa lagu barayaa in qofka marka aad la fadhido aad dhegahaaga siiso, oo aanad waxba kaga mashquulin, marka aad arrin qabanayso inaad oggolaansho waydiisato, iwm. Habdhaqannada caynkan ahi waxa ay hantaan dadka la yidhaahdo waa dadka dunida ugu badan ee caqliga caadiga ah leh.
Dadkaasi ma awoodaan in la dhaliilo, in la canaanto, in feker lagaga duwanaado, iwm. Markaa waa in la sasabaa oo la ammaanaa. Sidoo kale waxa aad iska ilaalinaysaa in aad mar walba hadasho, waxaad hadlaysaa uun marka ay muhiim tahay.
Laba, caadifaddaada ayaa lagu barayaa sida loo maamulo, waxa lagaa dhigayaa qof awooda in uu qariyo xanaaqiisa iyo farxaddiisa labadaba. Macnaha qofku wuxu qaamuuskiisaba ka saarayaa xanaaq iyo farxad. Cadowgaaga marna ha dareensiin inaad dareensan tahay.
Shay aad og tahay oo aad kuu dhibaya, isla qofkii sameeyey sidii qof aan waxba ogayn isaga dhig, waydii inuu sharraxo waxa jira, isaga oo been kuu sheegaya tus inuu yahay qof run jannada ku geli doona. Waxa jiray tix abwaan reer Awdal ah oo la odhan jiray Ugaas Nuur Ugaas Rooble lahaa oo ay
Cabdiqani Axmed iyo Aw Guudcadde.ku tilmaameen heer sare oo dublamaasiyad ah, waxa erayadeeda ka mid ahaa:
“Allahayow nin ii daran maxaan, daafta hore seexshay
Nin ii daaqsanayaana maxaan, daafidow kariyey
Jidhku nimaanu doonayn maxaan, hadalka deeqsiiyey
Ma degdege xaajada maxaan, ugu dulqaad yeeshay
Weji dabacsan daymo aan, dareen galin dubaaqiisa
Debno furan dabuub uuna ka didin, deexashiyo muuso
Qosol dibadda yaal oon ka iman, dhuunta dacalkeeda
Kanaan deggey kanaan doorbiday, kana dan baan moodey
Waxaan dood kaftan ah sheekada, ugu daleeyaaba
Dabinkaan u dhigo maalintuu, degelka soo saaro
Intiiyoon dawaarka u rogoon, xeeladda u daadsho
Isagoon dareen qabin maxaaan, kaga dayaansiiyey”
Waxa jirtay tuducyo tan la bah noqon kara oo ku jiray maanso uu lahaa Qamaan Bulxan:
“Daldhahsiga danaasaca la mood, dawr inaan ahayne
Isdalleemintaydaa ninkii, dagani eedaaye!”
Tabtan oo kale waxa maanso kaga sheekeeyey macallin Gaarriye orgi la sasabayo oo la naaxinayo oo ka dibna sasabadii iyo naxariistii run moodaya oo iska naaxaya, markii la naaxiyayna la gawracayo. Maansada waxa la yidhaa “Eed Hooyo laga galay”. Orgigana wuxu uga jeedaa hablaha inta badan been lagu sasabo ama ammaano, ka dibna marka birta la waydaariyo sidaa lagaga dhaqaaqo.
“Orgigii la naaxshee
Naxariis ujeeddo leh
Ayaantii la gawracay
Is-ogaaday baan ahay!”
Ammaantu waa awoodaha debacsan ee lagu hanto qof wal oo aad rabto inaad ka adkaato se aad isu dalleeminayso inta uu isagu noqonayo mid kugu tiirsan, inta se aad adigu ku tiirsan tahay ammaan, sarreyn dareensii, caadifaddaada maamul, dhegeyso, u sheeg inuu yahay qofka umnaddan Ilaahay ugu deeqay, u sheeg haddii Ilaahay toban isaga oo kale ah ina siin lahaa in dalkani horumari lahaa. Uga danbayn isaga oo aan ka dareenqabin ka adkow!
Guud ahaan nidaamyada caynkaas ah, ee buuggaas iyo tixahaasi isla waafaqsan yihiin, waa waxa lagu sheego guulaha dublamaasiyadda. Waana awood debacsan, dadka ammaanta jecel ee dhaliisha neceb ee aan dadka ka fekerka duwan aqbali karahayni, waa dadka ugu nugul ee sidaa laga yeeli karo.
Tabta uu buuggani sheegayo, “adigu naftaada baro, waxyaalaha aad ku xun tahay, meelaha aad daciifka ka tahay, iwm. Ka dibna cidda kugu sheegta waxaanad ahayn iska jir”. Waxa xusid mudan saddex kitaab oo isku bah ah oo kale ah 48 Laws of Power, The Art of War, iyo The Prince.
Waxyaalaha ay ka sheekaynayaan ma aha wax loogu talogalay in lagula dhaqmo bulshada caadiga ah ee aan siyaasadda qaybta ka ahayn sida xubnaha qoyska, asxaabta, jaarka, ardayda, dadka aad shaqowadaagta tihiin, ubadka, waalidka, odayaasha dhaqanka, culimada diinta, iwm.
Tabta uu askariga hubka u kala yaqaan xiliyada la adeegsado sida qoriga caadiga ah, bastooladda, lidka dabbaabadaha, lidka diyaaradaha, iwm, waxa muhiim ah in uu qofku u kala barto waxa uu akhrinayo ama baranayo xiliyada la adeegsanayo iyo dadka loo adeegsanayo! Dhaliisha, waanada, canaanta, isu caqlicelinta, bogaadinta, dhiirigelinta, iscaawinta iyo wadatashigu ba waa wax ay xaq isugu leeyihiin dadka isku dhadhawi. Haddii la idinka dhexwaayana waa isdalleemin.
WQ: Mustafe Sharma’arke
Previous articleAwoodaha af-tahanka
Next articleDaawo; Brof; Cali Khaliif, Maktabad Hoyatey Iyadoo Meeqaanka Ay Lahayd Lumin, Iyo Madhaxa Marxaladiisii Halgan Ee Uu Banneeyey.(Akhri).